Ch 18 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 18 John
18:1 I Jesosy, rehefa nilaza ireo zavatra ireo, dia niala Izy mbamin'ny mpianany manerana ny lohasahan-driak'i Kidrona, ary nisy saha, any izay nidiran'izy sy ny mpianany.
18:2 fa i Jodasy, ilay namadika Azy, dia nahalala izany tany, fa matetika i Jesosy sy ny mpianany nihaona tao.
18:3 Ary Jodasy, rehefa nahazo ny andiana miaramila avy na ny mpisorona avo sy ny mpanompony ny Fariseo, nanatona ny toerana nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana.
18:4 Ary toy izany koa i Jesosy, satria fantany izay rehetra efa hanjo Azy, mandroso ka hoy izy taminy, "Iza moa ianao mitady?"
18:5 Ary ireo namaly Azy, "Jesosy avy any Nazareta." Hoy i Jesosy taminy, "Izaho no izy." Ary Jodasy, ilay namadika Azy, koa nitsangana teo aminy izy.
18:6 Avy eo, raha hoy Izy taminy:, "Izaho no izy,"Izy ireo niverina ireo ka lavo tamin'ny tany.
18:7 Dia nanontany azy ireo indray izy: "Iza moa ianao mitady?"Ary hoy izy ireo:, "Jesosy avy any Nazareta."
18:8 Jesosy namaly: "Efa nolazaiko taminareo fa Izaho no Izy. Noho izany, raha mitady ahy, mamela ireo hafa mba hiala. "
18:9 Izany ka dia ny mba hahatanteraka ny teny, izay nanao hoe:, "Ary ireo izay nomenao ho ahy, Tsy very akory ny azy ireo. "
18:10 Ary Simona Petera, nanana sabatra, dia nanatsoaka azy, ary dia namely ny mpanompon'ny mpisoronabe, Ary Elisa nanapaka ny sofiny ankavanana. Ary ny anaran 'ilay mpanompo Malko.
18:11 Noho izany, Hoy i Jesosy tamin'i Petera: "Alatsaho ao ny sabatrao an-scabbard. Tokony ho tsy hisotro ny chalice Raiko izay efa nomena ahy?"
18:12 Ary ny andiana miaramila, ary ny komandy, ary ny mpanompo ny Jiosy nandray an'i Jesosy ka namatotra azy.
18:13 Ary nitondra an'i Jesosy izy, voalohany tany amin'i Anasy, fa izy no ilay ray-in-lalàna ny Kaiafa, izay mpisoronabe tamin'izany taona.
18:14 Ary Kaiafa no ilay nanome saina ny Jiosy fa mahatsara ny olona iray ho faty hamonjy ny firenena.
18:15 Ary Simona Petera nanaraka an'i Jesosy tamin'ny mpianatra hafa. Ary izany mpianatra fantatry ny mpisoronabe, ary toy izany koa dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianjan'ny tranon'ny mpisoronabe.
18:16 Fa Petera nijanona teo amin'ny fidirana ivelany. Noho izany, ilay mpianatra, izay fantatry ny mpisoronabe, nivoaka ka niteny tamin-dravehivavy izay ny mpiandry varavarana, ary dia nitondra an'i Petera niditra.
18:17 Noho izany, ny vehivavy mpanompo mitandrina ny vavahady tamin'i Petera, "Ianao ve tsy koa moa mba isan'ny mpianatra Lehilahy io?" Hoy izy, "Izaho dia tsy."
18:18 Ary ny mpanompo sy ny mpanompo dia nitsangana teo anoloan'ny vain'afo, fa nangatsiaka ny andro, ary izy ireo namindro. Ary Petera nitsangana teo aminy izy koa, namindro.
18:19 Ary ny mpisoronabe nanontany an'i Jesosy momba ny mpianany sy ny momba ny fampianarany.
18:20 Jesosy namaly azy: "Efa niteny miharihary tamin'izao tontolo izao. Efa nampianatra mandrakariva tao amin'ny synagoga sy tao amin'ny tempoly, ny Jiosy rehetra izay mihaona. Ary efa niteny na inona na inona ao amin'ny miafina.
18:21 Nahoana no manontany ahy ianareo? Anontanio ireo izay nandre izay nolazaiko taminy. Indro, dia mahalala ireo zavatra ireo izay efa nolazaiko. "
18:22 Avy eo, rehefa nilaza izany, iray nijoro teo akaiky teo ny mpanompony namely an'i Jesosy, nanao hoe:: "Ity ny fomba famalinao ny mpisoronabe?"
18:23 Jesosy namaly ka nanao taminy: "Raha niteny diso, tolotra fijoroana ho vavolombelona momba ny diso. Fa raha efa nolazaiko tsara, Ary nahoana no dia mamely ahy?"
18:24 Ary nasain'i Anasy nentina nifatotra ho any amin'i Kaiafa, ny mpisoronabe.
18:25 Ary Simona Petera nijanona namindro. Dia hoy ireo taminy, "Ianao ve tsy koa mba isan'ny mpianany?"Fa izy nandà ka nanao hoe:, "Izaho dia tsy."
18:26 Ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpisoronabe (havana ny azy izay Petera ny sofiny efa tapaka) hoy izy taminy:, "Tsy efa mahita anao tao amin'ny zaridaina niaraka taminy?"
18:27 Noho izany, indray, Petera nandà izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno.
18:28 Avy eo dia nitondra an'i Jesosy niala tao amin'i Kaiafa ho ao anati-rova. Ary nisy maraina, ary toy izany koa izy ireo tsy niditra tao anati-rova, ka tsy ho voaloto, fa efa hihinana ny Paska.
18:29 Noho izany, Pilato nivoaka tany ivelany ho azy ireo, ka hoy Izy:, "Inona no fiampangana no mitondra hamely ity lehilahy ity?"
18:30 Namaly izy ireo ka nanao taminy hoe:, "Raha tsy mpanao ratsy, dia tsy mba nanolotra azy ny aminareo. "
18:31 Noho izany, Hoy Pilato taminy:, "Entonareo Izy, ary tsarao araka ny lalànareo." Dia hoy ny Jiosy taminy:, "Tsy manam-pahefana ho antsika mba hampihatra ny didim-na iza na iza."
18:32 Izany ka ny tenin'i Jesosy, dia ho tanteraka, izay nilazany fomban'ny karazam-pahafatesana ho faty.
18:33 Ary Pilato niditra tao anati-rova indray, ary dia niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Hianao no Mpanjakan'ny Jiosy?"
18:34 Jesosy namaly, "Moa ve ianao hoe izany ny tenanao, na nisy olon-kafa nilaza ahy taminao momba?"
18:35 Pilato namaly: "Moa aho Jiosy? Ny firenenao sy ny mpisoronabe no nanolotra Anao tamiko. F'inona 'ty nataonao?"
18:36 Jesosy namaly: "Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Raha ny fanjakako avy amin'izao tontolo izao, mpanompoko no miezaka tokoa, mba tsy ho natolotra tamin'ny Jiosy. Fa: Ny fanjakako tsy avy eto ankehitriny. "
18:37 Ary hoy Pilato taminy, "Hianao no mpanjaka, avy eo?"Jesosy namaly, "Ianao hoe fa mpanjaka Aho. Fa izany no teraka, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao: ka mba hanatitra fijoroana ho vavolombelona ny fahamarinana. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. "
18:38 Hoy Pilato taminy, "Inona ny marina?"Ary rehefa nilaza izany, dia nivoaka ho any amin'ny Jiosy indray, ary hoy izy taminy, "Tsy hitako izay raharaha azy.
18:39 Fa misy fomba amam-panao, izay handefasako olona ho anareo amin'ny Paska,. Noho izany, no tianareo halefako ho anareo ny Mpanjakan'ny Jiosy?"
18:40 Ary izy rehetra niantso mafy imbetsaka, nanao hoe:: "Tsy ity iray ity, fa Barabasy. "koanefa jiolahy.